Uhleli lubhojozi ongenandlu | News24
Uhleli lubhojozi ongenandlu
UNks Zanele Mkhize eme eduze kwendlu yakhe ewile.ISITHOMBE: lethiwe makhanya
USEFANA nohlala emnyango owesifazane waKwaMpumuza osekuphele amasonto amabili ebhidlikelwe idlu kodwa engalutholi usizo.
UNks Zanele Mkhize (38) uthi indlu yakhe eyayinamagumbi amathathu yawiswa imvula emasontweni amabili edlule kanti kumanje uhleli kuyona ngoba akukho lapho angaya khona .
Ekhuluma ne-ECHO uNks Mkhize uthe isimo sibi kangangokuba ingane yakhe efunda umatikuletsheni isiphazamisekile njengoba ingasakwazi ukufunda kahle nabangani bayo kwazise ayisenakhaya. Uthe indlu yakhe yawa ekhona ngaphakathi nenye ingane yakhe eyodwa kodwa ngenhlanhla akuzange kulimale muntu.
“Indlu yawa ebusuku iwiswa imvula.Ngibonga nje ukuthi sinengane yami saphuma siphila kuyona.
Ngesikhathi iwa inhabathi yawela phezu kwezimpahla kanye nokudla imbala kwazise indlu yami lena indlu yodaka. Kumanje izimpahla zisangaphansi kwenhlabathi njengoba ngingakwazi ngisho ukuvula umnyango kuleli elinye igumbi.
“Angiphathekile kahle neze ngenxa yesimo esengiphila ngaphansi kwaso manje. Angisebenzi ngiphila ngokuqoqa amabhodlela kanye nezigubhu ngihambe ngiyokudayisa ngiphinde ngisize ngokuwasha kweminye yemizi endaweni ngithole lawomasentshana ukuthi sikwazi ukuthi silale sidlile nathi.Anginawo amandla okuthi ngingakwazi ukwakha njengoba ngingasebenzi. Ngicela nje usizo lokuthi nami ngibe nendawo ephephile engingakwazi ukuhlala kuyona nezingane zami noma indlu yomxhaso.”
Uqhube wathi nokuphepha akusekho njengoba ingasavaleki indlu. “Uma ngabe ngizohamba nomangiyaphi kudingeka ukuba ngicela omakhelwane ukuba bangibhekele noba umuntu angangena azithathele kona loku okuncane okusele aqede aphume azihambele.
“Ngake ngazama ukubhalisela indlu yomxhaso ngaphambilini kodwa ngangawuthola ngatshelwa ukuthi igama lami aliveli kwi-system. Okubuhlungu ngako konke loku ukuthi imina owayehamba ehla enyuka ebiza abantu ebatshela ukuthi kuyabhaliselwa imixhaso kodwa mina ekugcineni angisawutholi.Ngisho sekungathiwa inoma omuphi ke umsamariya olungileyo ongaqhamuka angisize ngingajabula kakhulu ukuze nje nami izingane zami zibe nekhaya elihloniphekile neliphephile. Manje awusakwazi ngisho ukuzishiya izingane ngoba usaba ukuthi zizongenelwa abantu.”
Uthe uselibikelile ikhansela lakule ndawo uNkk Jabu Ngubo wabe esefika ezohlola isimo wathembisa ukuthi uzomuzamela usizo.
“Ikhansela lifike ngoMsombuluko lathi lizoya kokhuluma nabantu laba abakha izindlu inkampani yaka-VDA ukubona ukuthi angeke yini baze bakwazi ukungisiza ngendlu njengoba ngake ngayibhalisela ngaphambilini.”
Imizamo yokuthola ikhansela ayiphumelelanga.